Sawirro: Shir heshiis buuxa lagu dhex-dhigay laba ka mid ah beelaha ABGAAL - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Shir heshiis buuxa lagu dhex-dhigay laba ka mid ah beelaha ABGAAL
Sawirro: Shir heshiis buuxa lagu dhex-dhigay laba ka mid ah beelaha ABGAAL
Jowhar (Caasimada Online) – Magaalada Jowhar ayaa xalay lagu soo gaba-gabeeyay Shirka Nabadeynta iyo Dib u Heshiisiinta beelaha Cabdalle Caroone iyo Celi Cumar, oo wada dega Degmada Cadale oo maalmihii u dambeeyay ka socotay magaaladaas.
Madaxweynaha Hirshabeelle, Cali Guudlaawe Hussein ayaa goobjoog ka ahaa heshiiskaas, waxaana ka qeyb-galay gudoomiye ku-xigeenka 1-aad ee Baarlamaanka ahna ku-simaha Gudoomiyaha, Siraaji Sheikh Isxaaq.
Sidoo kale waxa heshiiskaas taariikhiga ah qeyb ka ahaa Xubnaha Labada Gole ee Hirshabelle, Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe, Nabadoonada iyo Waxgaradka labada beelood, Ururada Haweenka iyo Dhalinyarada iyo Mas’uuliyiin kale.
Cali Guudlaawe oo hadal ka jeediyay munaasibada heshiiskaas ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay heshiiskan, maadama uu xusay inuu ugu horeyntii uu fidiyay gogasha labada beelood ay ku gaareen is-afgaradka nabadeed.
“Gogoshaan oo aan fidiyay caawana aan goobjoog u ahaa Heshiiskan Taariikhiga ah ee saxiixdeen laga gaaray Nabadeynta Beelaha Walaalaha ah ee wada dega Degmada Cadale waa ii farxad waxaana marwalba ka shaqeyn doonaa oo aan horey u sii wadayaa dib u Heshiisiinta Bulshada aan hogaamiyo Insha Allah” ayuu yiri Cali Guudlaawe.
Beelaha heshiiska kala saxiixday ayaa muddo dheer ka dhex aloosneyd colaad ka jirtay degmd Cadale ee gobolka Shabeelaha Hoose iyo deegaano ku dhow-dhow.
Waxa uu heshiiskan meesha ka saari doona dagaalo inta badan dhex mari jiray beelahaas, kuwaasi oo hore u sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac baaxad leh.
Deegaanada hoostaga Shabeelaha Hoose ayaa inta badan waxa ka dhaca dilal aanooyin qabiil ah oo muddo soo jiitamayay, waxaana lagu wadaa in heshiiskan uu arrintaas meesha ka saaro.